सुन काण्डबारे पूर्वडिएसपीको प्रश्नः पुलिस मात्रै पक्रने कि नेता पनि ? – हिमाल न्युज
सुन काण्डबारे पूर्वडिएसपीको प्रश्नः पुलिस मात्रै पक्रने कि नेता पनि ?
३३ किलो सुन प्रकरणले अहिले देश रापिएको छ, अपराधीलाई कठघरामा उभ्याएर सजायँ दिलाउनुपर्ने दायित्व भएको प्रहरी अधिकारीहरु बर्दीमै कठघरामा उभिएको दुर्भाग्यपूर्ण समाचारले छापाहरू रंगिएका छन् । प्रहरी बर्दी, आफैंमा परम्परागत बिश्वास बोकेको, उच्च मनोबलले चलेको र चल्नुपर्ने यस्तो सेवा हो, शताब्दीदेखि नै प्रहरी बर्दिलाई सरकारको सिन्दुर पहिरेको एउटा बिश्वास र शक्तिको रुपमा लिएर डर, भर र सर प्रतीकको रुपमा लिइदै आएको अबस्थामा अहिले जुन रुपमा समाचार छरपस्टीएको छ ।
यसले प्रहरीप्रतिको परम्परागत बिश्वास अनि सम्मानमा आँच त पु¥याउने नै छ, संगसंगै देशको समग्र सुरक्षा प्रणालीमाथि नै गहिरो प्रश्नचिह्न खडा गर्ने सम्भावना देखिन्छ । यससंगै सुन काण्डमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकारीमाथि नै अनुसन्धान गर्न बनेको समितिले जुन तवरले धमाधम बयान लिदै हिरासतमा राख्ने कार्य भइरहेछ, यसको दूरगामी असर पर्ने सम्भावना रहन्छ ।
सामाजिक संजालको द्रुत सक्रियताले गर्दा यी अनुसन्धानमा नाम परेका अधिकारीहरुप्रति समाजले छुट्टै धारणा निर्माण गरिसकेको हुन्छ । कथमकदाचित उनीहरु निर्दोष साबित भए भनेपनि भोलि समाजमा आएर आफ्नो बर्दीको मर्यादा कायम राख्न नसक्ने असहज परिस्थितिको सिर्जना हुनसक्छ । तसर्थ, अहिले जुन तरिकाले भटाभट बाहिर ल्याउने कार्य भइरहेछ, सामाजिक संजाल र अनलाइन छापा तताउने कार्य त भएकै छ । तर भोलि प्रमाणको अभावमा हुनसक्ने परिणाम पछिको परिणामले सिंगो प्रहरी संगठन अनि सुरक्षा प्रणालीमाथिको बिश्वासको प्रश्नचिन्ह मिटाउन गाह्रो हुनसक्छ । किनकि दुई लाख जनसंख्या रहेको शहरमा दुइ सय प्रहरीले सम्पूर्ण सुरक्षा ब्यबस्था मिलाइरहेको हुन्छ, यसको आधार भनेकै बर्दिप्रतिको त्यहीं भर र बिश्वास हो । यसको मतलब यो होइन कि, अपराधीक अनि गलत मनसायप्रेरित व्यक्तिहरुले उन्मुक्ति पाउन ।
जब ३३ किलो सुनसँग सम्बन्धित सनम शाक्यको लाश गाडीको डिक्कीमा भेटियो, त्यसमा भएको अनुसन्धानमा चित्त नबुझेर सिधै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराईएपछि मन्त्रिपरिषदबाटै बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनेर कुन सक्रियता देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले यतिसम्म चासो राखिसकेपछि अब यो प्रसंग यहीं सकिनु हँुदैन ।
यस घटनाबाट के कुरा उजागर भएको छ भने, नेपालको एअरपोर्ट तस्करीको लागि खुला द्वार हो । जसकोबारेमा कुनैदिन अपराधको दुनियाँमा कुख्याति कमाएर हाल नेपालको कारागारमा आजीवन सजाय भोगिरहेका फ्रान्सेली चाल्स शोभराजले पंचायत कालमै भनेको भनेर चर्चित भनाइ, ‘नेपालको एअरपोर्टबाट त म भैसीं पनि छिराइदिन सक्छु’ (उनले त्योकुरा भने–भनेनन् उनि नै जानुन्) । जे होस् पटक पटक सुन र बिदेशी मुद्रा तस्करीका घटनाहरु बढ्नु र त्यसमा प्रहरीकै संलग्नताका कुरा बाहिरिएपछि अब सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । के प्रहरी अधिकारीको मात्रै संलग्नतामा यो सम्भब छ ? वा त्यो भन्दा माथिल्लो निकाय पनि यसमा संलग्न छ ?
यस संगसंगै सम्बन्धित निकाय, बिशेषगरी उच्च राजनीतिक शक्तिहरुले हेर्नैपर्ने एउटा समाचार छ, जसमा गतबर्ष मात्रै अवकाश पाएका पूर्व डआइजी केशब अधिकारीको प्रश्नबाचक सुझाब छ (एउटा डिआइजी, एसएसपी वा एसपीले मात्रै चाहेर यत्ति सजिलैसंग यत्तिको कारोबार हुन सक्दैन, यो एउटा पूर्व उच्चाधिकारीको गम्भीर सुझाब हो, यसलाई गम्भीरता साथ लिनैपर्छ ।
यसभन्दा अगाडि गएर हेर्दा तत्कालिन दोश्रो प्रतिनिधिसभामा २०५५ साल पुस २८ गते संसदीय समितिले पेश गरेको प्रतिबेदन हेरे पुग्छ, जसमा भनिएको छ, ‘अबैध रुपमा बिदेशी मूद्रा, सुन, बहुमूल्य मालसामान ओसारप्रसार गरिदिनेमा बिमान चालक, परिचायक, परिचारिका, लोडर, क्लिनरलगायतका कर्मचारी संलग्न भएर क्याटरिङ्ग सेवा गर्ने गाडी,फोहोर फल्ने थैला प्रायो गर्दै सामान वारपार गर्ने गरिएको देखियो । जसमा उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिहरुको संलग्नता पनि देखियो’ भनिएको छ ।
तत्कालिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेका बामदेब गौतम उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेको सरकारको पालामा तस्करी संस्थागत भएको आवाज संसदमा उठेपछि २०५४ सालमा संयुक्त संसदीय समिति बनाइएको थियो । त्यस प्रतिबेदनकै आधारमा कानुनी आधार तयार गर्न तत्कालिन नायब महान्यायाधिवक्ता (पछि सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश) बलराम केसीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाएर प्रतिबेदन थनक्याइयो ।
सम्पूर्ण राजनीतिक दलको संलग्नतामा बनेको प्रतिबेदन अहिले गायब नै भएको छ । त्यसै साल एमाले पार्टी फुटेपछि एमालेका नेता प्रदिप नेपालले खुलामञ्चबाट भ्रष्ट्राचारीको नाम घोषणा गर्ने कार्यक्रममा २ नं. भ्रष्टाचारी तकालिन गृहमन्त्री नेपाली कांग्रेसका खुम बहादुर खड्का र १ नं. भ्रष्ट्राचारी चाहिँ बामदेब गौतमलाई घोषणा गरेका थिए ।
त्यसबेला खुलामञ्चबाट घोषणा गरेको आरोप पूर्बग्राही हुन सक्ला तर औंला भने ठडिएकै हो । जसको उत्तर अझै पनि खोज्नु सान्दर्भिक हुनसक्छ, जसले अहिले उठेका प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न मद्दत पुर्याउन सक्छ । के प्रहरीको मात्रै संलग्नताले यति सम्मको तस्करी हुनसक्छ ? वा उच्च राजनीतिक अनि प्रशासनिक संलग्नता पनि जिम्मेवार छ ? प्रधानमन्त्रीले अहिले दिएको चासो मात्रै यो एउटा भंगालोमा मात्रै सिमित रहनेछ वा यसको मूलसम्म नै पुग्ने किसिमको छ ?
यहाँ सान्दर्भिक हुनसक्ला । आजभन्दा ३ दशकअघि जब दरबारभित्रको देवर–भाउजुको जुधाइमा परेको भनिएको पूर्बआइजीपी डि.बि. लामा, तत्कालिन अधिराजकुमार धीरेन्द्रका एडीसी कर्नेल भरत गुरुङलाइ तस्करीसहित बिभिन्न आरोपमा पक्राउ गरियो । तब त्यतिखेर राष्ट्रिय पंचायतको शून्य समयमा बोल्दै तत्कालिन रापस. गम्भीरजंग कार्कीले ‘यी झिङ्गे, बुदुना माछालाई पक्रेर के तस्करी अन्त्य हुन्छ ? तस्करी रोक्ने नै हो भने डिल्लीबजारको ओरालोको ह्वेल माछालाई पक्रनुपर्छ’ भनेर, तत्कालिन भूमिगत गिरोहको उपनाम पाएका खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिब शरदचन्द्र शाहलाई इंकित गरेका थिए ।
त्यस्तै अहिले पनि प्रहरीलाई भरियाको रुपमा प्रयोग गर्ने अघोषित परम्परा नै छ, कुनै सुरक्षित सरुवा, बढुवा प्रणाली नभएको अबस्थामा शक्तिकेन्द्रलाई खुशी पार्नैपर्ने अर्थात् उनीहरुको नजिक हुनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा प्रहरी अधिकारीहरु चाहि(नचाहि पनि राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरुको प्रयोगमा आइरहेका छन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण चर्चित सुडान काण्ड नै छ ।
कमसल खालको बख्तरबन्द गाडी सस्तोमा किनेर आफ्ना जवानहरुको ज्यान खतरामा पारेर शक्तिकेन्द्र खुशी पार्ने हुदा आज नेपाल प्रहरीका तीन–तीन जना आईजीपीहरु डिल्ली बजारको जेलको चार दिवारभित्र ति शक्ति केन्द्रलाई रिझाउदाको क्षण सम्झिदैँ टोलाइरहेका छन् । तर ति शक्ति केन्द्रहरु अहिले पनि राजनीतिमा सक्रिय छन् ।
भनिन्छ, २०६३ सालमा भर्खरै खुला राजनीतिमा आएको तत्कालिन एउटा शक्तिले चुनाबमा अर्थ अभावको कारण तत्काल चुनाबमा भाग लिन नसक्ने देखाएर चुनाबबाट पछि हट्न खोजेपछि त्यसबेलाका प्रमुख ३ राजनीतिक शक्तिले यहीं प्रहरीले सुडान शान्ति मिशनको लागि किन्न छुट्याइएको रकमलाई नै कमसल बख्तरबन्द किनेर बाँकि दामासाहीले बाँडेर चुनाबी खर्च निकालेको कुरा बाहिर आएको थियो । यसको सत्य तथ्य हिजो अदालतमा नबकेपनि जेलबाट निस्केपछि कुनै दिन त्यस काण्डका प्रमुख पात्र पूर्वआइजीपी ओम बिक्रम राणाले कतै न कतै बक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक खेलाडीहरुले भ्रष्टाचार गरेका कुराको सबै प्रमाण भेट्न गाह्रो हुनसक्छ, तस्करी वा भ्रष्टाचारमा उनीहरुको प्रत्यक्ष कानुनी संलग्नता नभेटिन सक्छ । तत्कालिन प्रतिनिधिसभाका सभामुख तारानाथ रानाभाटले संसदमा भनेका थिए, ‘भ्रष्टाचारका प्रमाण खोजेर पाइदैन, प्रमाण भनेको जिम्मेवार तहमा बस्नेका जीवनस्तरमा आएको अस्वाभाविक परिवर्तन नै हो’ । तसर्थ, उनीहरुको विगत र बर्तमानको जीवनस्तर बीचको अन्तर दाँज्नेबित्तिकै यसको पुष्ट्याँई गर्न सजिलो हुनसक्छ । अरु धेरै केही गर्ने पर्दैन । २०४८ भदौ २० (नेपाली कांग्रेस सरकार) र २०५१ साल मंसिर २७ गते (नेकपा (एमाले) सरकार) २०६३ साल भाद्र र २०६५ साल श्रावण (माओबादी सरकार)को गोरखापत्रमा प्रकाशित मन्त्रीहरुको सम्पति विवरण हेरेर अहिले ति मन्त्रीहरुका सम्पति विवरण दाँजे सबै छर्लङ्ग हुन्छ ।
ती सम्पति विवरणमा देखिनसक्ने फरकहरु यी र यस्तै एअरपोर्ट अनि अन्य ठाउँमा भएका सुन र सुडान काण्डहरुबाट भागबण्डामा परेका भागहरुबाट नै बनेका हुन् । अनि भाग लगाउने हरु यसरी नै जेल जान्छन्, गाली खान्छन्, तर भाग पाउनेहरु यसरी नै सत्तामा पटक पटक जान्छन् । अनि ताली खान्छन् ।
यो क्रम नरोकिएसम्म अझै एअरपोर्टका कति लोडरहरुले आत्महत्या गर्नुपर्ने हो, अनि सुन भरियाका नाममा कति नेपालीका छोराहरुले अनाहकमा मारिनुपर्ने हो ? अनि स्वर्णिम भबिश्य बोकेका कति प्रहरी अधिकारीहरुले बर्दीमा नै बयान दिँदै आफ्नै बडीगार्डको पक्राउमा पर्नुपर्ने हो ? अब यस्ता वातावरणको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । अर्काको काँधमा बन्दुक राखेर आफ्नो लागि शिकार गर्ने परम्पराको अन्त्य अब आवश्यक छ ।
अहिलेको सुनकाण्ड एउटा दुर्भाग्य हो । तर यहीं बिन्दुबाट यो भंगालो मात्रै हेइन, मूल नै संग्ल्याउने अभियान शुरु गर्ने मौकाको रुपमा यसलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने अरुले न्याय पाउँथे । अरु जे भएपनि देशले न्याय पाउँथ्यो । अनि बाटो पाउँथ्यो । तसर्थ यसभित्रको उच्च राजनीतिक अनि प्रशासनिक संलग्नता पहिल्याउन जरुरी छ । अनि तिनलाई पनि अहिले प्रहरी अधिकारीहरुलाई हिरासतमा लिए जसरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । यो कार्यको नेतृत्व लिएर एउटा ऐतिहासिक कार्यको शुरुवात गर्ने अवसर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पाएका छन् ।
वास्तवमा अब प्रधानमन्त्री ओलीले पाउनु पर्ने र बन्नु पर्ने कुरा के नै बाँकि छ र ? अनि आफूले कसैको लागि बनाइदिनुपर्ने र गरिदिनुपर्ने पनि को नै छ र ? नेपालमा परिवारलाई बनाइदिनुपर्ने र बनिदिनुपर्ने खेलले नै ति खेलाडीहरु पहेलो कार्ड र रातो कार्डमा परे । इतिहासका राम्रा खेलाडीहरु रातो कार्डसँगै खेलबाट बाहिरिएर दर्शक बन्न बाध्य भइ ‘हिजो बल पाएको बेला यसरी खेलेको भए हुने रहेछ’ भन्ने पश्चातापपूर्ण अबस्थाबाट गुज्रिरहेछन् ।
(लेखक नेपाल प्रहरीका पूर्व डिएसपी हुन् । हाल बेलायत ।)
जनप्रतिनिधिको लुट्ने तरिका : गाडी भाडाबाटै दैनिक हजारौं...
निल्नु न ओकल्नु चिनियाँ जहाजः एक वर्षमा ६०...
अर्थमन्त्री खतिवडाको एउटा निर्देशनले राज्यलाई फाईदै फाईदा ब्यापारीलाई...
मोदीको लागि बनाईएको स्वागतद्वार र अभिननन्दन स्थल हावाहुरी...
प्रचण्डले भने – वामदेवलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको...
सुरक्षा खतराको सामना गर्न सेना सतर्क हुनुपर्छ :...
५ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने युवकलाई १५ वर्षको...
हतियारसहित चार भारतीय र दुई नेपाली पक्राउ
आफ्नै श्रीमतीलाई हत्या गर्ने हत्यारा श्रीमानलाई जन्मकैद
प्रहरीलाई जसले लोभ देखाउँछ, त्यसैलाई थुन्नू:एसएसपी विश्वराज पोखरेल
दुर्गा बिरहीको नयाँ गीत “पातीले बारेको घर”
गुल्मीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन, १ सय ५० जनाले पाए काम
‘गलबन्दी’ युट्युबको ट्रेन्डिङ १ मा
तत्काल सरकार परिवर्तन हुदैन : प्रचण्ड
‘श्वेताश्री फाउन्डेशन’को झन्डा सगरमाथाको चुचुरोमा !